विवाह गर्दाको फाइदा, रोचक तथ्य - ज्ञानविज्ञान
विवाह गर्दाको फाइदा, रोचक तथ्य
# लामो आयु
हालै गरिएको एक अध्ययनले अबिवाहित पुरुषको तुलनामा बिवाहित पुरुषको आयु लामो हुन्छ । अर्थात तुलनात्मक रुपमा अबिवाहित पुरुष चाँडै मर्ने सम्भावना ६ प्रतिशत बढी हुन्छ । ७ वर्ष लगाएर सम्पन्न गरिएको सो अध्ययनका अनुसार विवाहित पुरुषहरु अविवाहितको तुलनामा बढि स्वस्थ हुन्छन् ।
वैज्ञानिकहरु यतिसम्म भन्छन् कि पुरुषहरुको लामो उमेरको रहस्य विवाहित हुनु नै हो किनकी महिलाले आफ्नो श्रीमानको ज्यादै ख्याल राख्छिन् ।
# विवाहले तनाव साझेदार
बिवाहित पुरुष एक्लो जीवन बाँच्ने पुरुषको तुलनामा औसत ७ वर्ष बढि बाँच्छन् । यसको कारण हो भने पत्नीहरुले पतिको तनाव सेयर गर्नु । उनले घरको धेरै काम आफैं गर्छिन्, जबकि अविवाहित पुरुषले त्यो सुविधा पाउँदैनन् ।
# रोगहरु टाढा भाग्छन्
वल्र्ड हार्ट फेडरेसनले आफ्नो एक सोध प्रतिवेदनमा भनेको छ, कसैको प्रेम प्राप्त गर्नु वा कसैलाई प्रेम गर्नु मुटु बलियो बनाउनका लागि प्रभावकारी ओखति हो । प्रेमको कारण नै व्यक्तिले आफ्नो मनस्थितिलाई सदैव सकारात्मक राख्न सक्छ, र तनावबाट टाढा रहन्छ ।
मुटुरोगका विशेषज्ञहरुका अनुसार प्रेमको कारणले नै भावनात्मक सहारा मिल्छ जसले मुटुमा बोझ पर्न दिँदैन । यही कारण विवाहित व्यक्तिलाई हृदयघात हुने सम्भावना अविवाहितलाई भन्दा कम हुन्छ ।
वल्र्ड हार्ट फेडरेसनले हृदयघात, पक्षघात वा हिप फ्याक्चर भएका दुई सय ४० रोगीहरुको विश्लेषण गरेको थियो । रोगीलाई ठिक गर्न जति योगदान औषधिको हुन्छ, त्यो भन्दा निकै धेरै सकारात्मक भावनाको हुने सोधमा पाइयो । यसबाट यो पनि थाहा हुन्छ कि कुनै रोगी व्यक्तिलाई चाँडै ठिक हुनका लागि उनलाई तनावबाट मुक्त राख्नुपर्छ र उसको सोचलाई सकारात्मक बनाउनुपर्छ ।
# विवाह नगर्दाका बेफाइदा
अबिवाहित पुरुषहरुले बिवाहित पुरुषहरुको बीचमा आफूलाई भिन्न महसुस गर्नेछन् । बिवाह नगरेका पुरुषलाई परिवार र समाजले पनि उति महत्व दिदैन ।
उमेर छिप्पिदासम्म बिवाह नगर्ने व्यक्तिहरुको विषयमा समाजले विभिन्न दृष्टिकोण बनाउँछ ।
जब आफ्नो दाजुभाई, दिदीबहिनी बिवाहित जीवन बिताइरहेका हुन्छन्, त्यतिबेला आफूलाई अलग महसुस गरिन्छ । उनीहरुको सोच, भविष्यका सपना, कुराकानीका विषय आफ्ना परिवार तथा बच्चाहरुसँग जोडिएका हुन्छन् । जबकि अबिवाहितसँग यी विषयमा गर्ने कुरै हुँदैन ।
# विवाहका फाइदा
सिंगो जिन्दगीमा साथ दिने जीवनसाथी पाइन्छ । आफ्नै एउटा परिवारको रचना गर्न सकिन्छ, जसलाई हामीले अभिभावकत्व दिन सक्छौ । बिवाहपछि महिला र पुरुष दुवैले नयाँ नातेदारहरु पाउँछन् र त्यो नाताको बेग्लै रमाइलो हुन्छ ।
Don't Miss it औषधी उपचारमा कालो तिल
Up Next खाली खुट्टा हिड्दा हुने फाइदाहरु
8 hours ago Pradeep Karki
13 hours ago Pradeep Karki
Spread of vegetables
यी भोज्यपदार्थहरूले हटाउछ फाइबरको कमी
घरमा पाइने सामान्य वस्तुहरूको प्रयोग गरेर टाउकोलाई आराम दिन सकिन्छ
– नरिवलको तेल टाउकोमा लगाएर १०–१५ मिनेट मसाज गर्नाले पनि टाउको दुखाई कम हुन्छ । – दालचिनीलाई पिसेर पाउडर बनाउने…
खोकीसंग जोडिएको दालचिनीको यस्तो छ सम्बन्ध
–उमालेको दालचिनी पानीलाई कपडाले छान्ने र दिनमा दुई पटक त्यो पानी पिउने । –केही दिनसम्म नियमित दालचिनी पानीको सेवन गरेमा…
यस्ता कारण छ क्वाँटी खानुपर्ने
स्वास्थ्यका लागि चार दिन भिजाएर टुसा उम्रेपछी मात्र पकाइने यस्ता परिकार कति फाइदा जनक छन् त ? क्वाँटीका फाइदा :…
कस्तो छ तपाईंले जिउ पुछ्ने तौलिया ?
तौलिया सुख्खा वा धेरै समय चिसो/भिजेको कुरा त्यसबाट आउने गन्धबाट थाहा पाउन सकिन्छ। ‘तौलियाबाट गन्ध आइरहेको छ भने, जहाँबाट गन्ध…
छाला चाउरी पर्नबाट बच्न यी फलफुल खानुस
मानिसहरु महंगा क्रिम लगाएर आफ्नो चाउरी परेको छालालाई लुकाउने गर्छन । तर त्यसो गर्नु भन्दा राम्रो स्वास्थ खानेकुरा खानु राम्रो हुन्छ ।…
के नाकबाट रगत बग्छ ? उच्च रक्तचापको संकेत
उच्च रक्तचापको कारण धमनीमा रगतको दबाब बढ्न जान्छ । दबाब यसरी बढ्दै गएका कारण धमनीमा रक्तप्रवाह सुचारु हुनका लागि मुटुले…
मुलाको पात खानुका फाइदाहरु
१. पिसाबसम्बन्धि समस्या हट्ने मुलाको पातको सेवन गर्नाले पिसाबसँग सम्बन्धित समस्याहरु हट्छन् । २. कमजोरी हट्ने मुलाको पातमा आइरन र…